Al-Shabaab oo shaacisay in ay hada iska dhaafeen waxyaabo ay dadku ku dhibsadeen Maamulkooda(Top News). | warsugansomaliya.wordpress.com
Al-Shabaab oo shaacisay in ay hada iska dhaafeen waxyaabo ay dadku ku dhibsadeen Maamulkooda(Top News).
Dhagar qaba yaasha Al-Shabaab Saraakiil sare oo katirsan ayaa Shaaca ka qaaday in ay iska dhaafeen karbaashka dadka ku dhaqan Deegaanada ay ka taliyaan’ ay la dhici jireen iyagoona tilmaamay in karbaashkaasi ay dad badan ku naceen, degaanadoodana looga yaacay.
Fu’aad Maxamed Qalaf (Fu’aad Shangole) oo kamid ah saraakiisha sar sare ee Al-Shabaab oo maanta Khudbad u jeediyay mid kamid ah Beelaha Dega Gobolka Sh/Hoose ayaa tilmaamay in ay iska dhaafeen karbaashka ama garaacida dadka shacabka ah ee gala dambiyada kala duwan.
‘’Waxaan go’aansanay in aan iska dhaafno karbaashka dadka ku dhaqan Deegaanada aan maamulno , karbaashka ayaan bilownay mar hore hadana waxaan u joojinayay in dadka in la garaaco aysan waxba ku qaadaneyn waxaana hada garanay oon usoo jeesanay in aan dadka diinta barno si aan garaacis uga maarano’’ ayuu yiri Fu’aad Shangole oo dadkii xadhigooda iyo dilkooda kq cararay u gacan hatinaya .
Dhinaca kale Fu’aad Shangole ayaa ka hadlay lacag Shan Milyan ah ay Dowlada Mareykanka madaxiisa dul dhigtay waxa uuna tilmaamay in aysan wax wal wal ah arintaasi ku heyn taa badalkeedana uu isagu Madaxweynaha Mareykanka dul dhigay ilaa 10-neef oo geel ah .
Wuxuu yiri isagoo jees jeesaya,
“ma maqasheen Anigan Miskiinka ah Maraykanka ayaa Iraadinaya,Shan Malyan ayaan ugu qoranahay,Anigana Obama waxaan ku qoray Toban Neef oo geel ah,waliba tobankaasi Neef oo geel ah suldaan Cali wuxuu yiri Beesha Jiido ayaa bixinaysa”ayuu Yiri Fu’aad.
Hadalka kasoo yeeray Fu’aad Shangole oo kamid ah Saraakiisha sar sare ee Al-Shabaab ayaa imaanaya xili Shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Deegaanada ay Kooxdaan maamulaan ka cabtaan dhibaatooyin ay kala kulmaan Al-Shabaab ay ugu horeeso karbaash iyo ciqaab dilkuna udheer yahay taa oo keentay in dad badan ay dhibsadaan kunoolaanshiyaha deegaanada ay Shabaab maamulaan kaliftayna in dad badani uga qaxaan goobahay maamulan iyo wadankaba.
← Madaxweyne Xassan Sheekh iyo Axmed Madoobe oo markii ugu horeysay si toos ah isu hor-fariisanaya si ay xal uga gaaraan arinta Jubaland.
Mid kamid ah La taliyaasha Madaxweynaha Soomaaliya oo lagu xukumay in uu bixiyo lacag dhan 15-Milion oo Dollar OO Magdhaw ah →